ချီးပေါက်တယ်ဆိုတာက လူတိုင်းလိုလိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ သာမာန်ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ ။ သို့ပေမဲ့ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဟောင်ကောင်ကကျောင်းသားတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ Hong Kong Diploma ဖြစ်တဲ့ Secondary Education Examination စာမေးပွဲကိုဖြေကြားခဲ့စဉ်အချိန်အခါက အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်ဝေမျှခဲ့ပါတယ် ။ အဲတာကတော့ စာပေးပွဲဖြေဆိုနေစဉ် သူ၏အရှေ့ခုံမှာ ထိုင်နေခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟာ 2နာရီခန့်မရပ်မနားတမ်းချီးပေါက်နေခဲ့လို့ပါပဲ ။ […]
ရေကူးကန်ပါတဲ့အိမ်လေးပါဆိုပြီး ဝယ်ပြီးခါမှ ဂျင်းထည့်ခံလိုက်ရမှန်း သိခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားရဲ့အဖြစ် (ရုပ်သံ)
တစ်ချို့သောဈေးရောင်းသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို လူတွေဝယ်အောင် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း မျိုးစုံချီးမွှမ်းခန်းဖွင့်ကျတဲ့အပြင် ၊ အချို့ဈေးရောင်းသူတွေကတော့ ပိုက်ဆံရရင်ကျေနပ်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ လိမ်လည်လှည့်စားပြီး ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတတ်ကြပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံက အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ မြို့ကြီးရဲ့ရှုပ်ထွေးဆူညံတဲ့နေရာမှာမနေထိုင်ချင်တော့လို့ ၊ မြို့ပြင်ဖက်မှာ တည်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းကို ဝယ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါတိုက်ခန်းဟာ ကြော်ငြာထဲမှာကတော့ အဆင့်တန်းမြင့်စွာတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး နှင့် ပန်ခြံကလေးတွေပါ […]
ညကြီး အချိန်မတော် လင်မယား နှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို မသင်္ကာလို့ ရှာဖွေ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ..သနားစရာ ယောက်ျားရဲ့အဖြစ်….
ညကြီး အချိန်မတော် လင်မယား နှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို မသင်္ကာလို့ ရှာဖွေ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ..သနားစရာ ယောက်ျားရဲ့အဖြစ်…. ညကြီး အချိန်မတော် လင်မယား နှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို မသင်္ကာလို့ ရှာဖွေ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ… သနားစရာ ယောက်ျားရဲ့အဖြစ်…. အရမ်းကိုယ်ချင်းစာ သနားမိရတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုပါ… အလုပ်ကပြန်လာ […]
Face app အသုံးပြုပီး ပုံပြောင်းတဲ့ ယောကျာ်းထုကြီးကို ဒဲ့ကြီးစော်ကားလိုက်တဲ့ ကွီး
Face app အသုံးပြုပီး ပုံပြောင်းတဲ့ ယောကျာ်းထုကြီးကို ဒဲ့ကြီးစော်ကားလိုက်တဲ့ ကွီး လတ်တလော အွန်လိုင်းမှာ Face app ကိုအသုံးပြုပီး အပျော်တင်နေကြတာ အရမ်းခေတ်စားလာနေပါတယ်။ နံမည်ကြီး အနုပညာရှင်ကြီးတေကိုယ်တိုင်လည်း အပျော်အသုံးပြုနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပီး သဘောကျသူရှိသလို သဘောမကျသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်လက်ရှိအနေအထားရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံလေးတွေဟာ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ သိချင်စိတ်နဲ့ […]
အရက်မူးလွန်ကာ သော့တွဲကို အမြည်းမှတ်ပြီး ဘီယာနဲ့ မျှောချလိုက်မိသူရဲ့ အဖြစ်
တစ်ပတ်လုံး အလုပ်တွေကြားမှာ ခေါင်းစိုက်နေရတဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် သောကြာနေ့ရောက်ပြီဆိုရင် အပျော်ဆုံးပါပဲ။ ညနေစောင်းလေူမှာ ဘော်ဒါ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ချိန်းပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို ရစ်ရွှေရည်လေးနဲ့ အနားယူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေချိန်ကျော်ပြီး အမူးလွန် သွားပြီဆိုရင်တော့ ပြသနာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ တတ်စမြဲပါပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံ ဂွမ်ဒေါင်းစီရင်စုက အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်လူငယ်ဟာ […]
ရန်ကုန်-ပြည်- မန္တလေး Express ကားပေါ်မှာ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ အန်တီရယ်
ကားပေါ်ရောက်ရင်အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် ၅၀ ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက် ရန်ကုန်-ပြည်- မန္တလေး Express ကားပေါ်တွင်ဖြစ်သည် ကားပေါ်ရောက်ရင်အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် ၅၀ ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက်မှ ယဉ်မောင်းအားကားစတင်ထွက်ချိန်တွင် အော်ပြောလေသည် ” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ရင်အဒေါ့်ကိုပြောပါကွယ်” ” ဟုတ်ကဲ့ ဂျီးဒေါ်ရေ” ထိုသို့ဖြင့် ကားစီးလာရင်း အဒေါ်ကြီးမှာအိပ်ငိုက်ပါလာတော့သည် နာရီအနဲငယ်အကြာတွင်တော့အဒေါ်ကြီးအသံဟိန်းထွက်လာသည် ” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ပြီလားကွဲ့” […]
ဖဲရိုက်ပြန်လာတာတောင် အိမ်ကမိန်းမက ထိုင်ရှိခိုးရတဲ့ မောင်ခွေးရဲ့ အကြံ (ယောက်ျားရောမိန်းမရော ဖတ်ထားကြနော်)
ဖဲရိုက်ပြန်လာတာတောင် အိမ်ကမိန်းမက ထိုင်ရှိခိုးရတဲ့ မောင်ခွေးရဲ့ အကြံ အကြံပိုင်သော မောင်ခွေး ည ၉ နာရီလောက် လင်မယား (၂) ယောက် အိမ်ပြန်ကြတော့ လမ်းတစ်ဝက် မှာ မျက်နှာဖုံးစွတ် နဲ့လူ ၄ယောက်ထွက်လာပါတယ်…ဓါးကိုစီကိုင်ထားပြီးတော့..ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူလို့ထင်ရတဲ့သူက… ” လက်မြှောက် ထားပါ အော်မယ်မကြံနဲ့….ဓါးက မျက်စိမပါဘူး… မင်းတို့ […]